ESRI dia nandefa fanontana manokana hanamora ny fidiran'ny GIS an'ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo - Geofumadas
March, 2012 ArcGIS-ESRI, Fampianarana CAD / GIS
Esri manolotra mpianatra ArcGIS ho an'ny mpianatra, fanontana manokana izay misy ny fivoarana farany sy fandrosoana amin'ny teknolojia fanadihadiana ara-jeografika ary mikendry ny mpianatra eny amin'ny oniversite.
Ny fampiasana ny teknolojia Esri ao amin'ny Oniversite sy ny filàna manokana sy ny toe-piainan'ny mpianatra, dia nametraka an'i Esri ho anaoArcGIS ho an'ny mpianatra, fitaovana manokana ahafahanao mamolavola tetikasa mora, fanendrena an-dakilasy ary famotopotorana miaraka amin'ny sarintany, data ary fampahalalana ara-jeografika. Ity vahaolana ity dia manamora ny fahafaha-mizara asa amin'ny mpampiasa hafa nefa tsy mila fampandrosoana sy fampiasana vaovao misy amin'ny alàlan'ny fametrahana ny fitaovana amin'ny solosaina rehetra.
"ArcGIS ho an'ny mpianatra dia fandrosoana eo amin'ny fifandraisan'ny mpianatra amin'ny GIS sy ny fianarany, ny lohahevitra, sns. amin'ny ArcGIS ho an'ny mpianatra dia tsy mila miankina amin'ny ekipan'ny Oniversite intsony ny mpianatra, fa afaka miasa amin'ny ekipa manokana. Fotoana tena tsara ho an'ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo izay miara-miasa amin'ny GIS, satria hanana fahazoana mora kokoa amin'ny teknolojia izy ireo ",
hoy i Pedro Rico, tompon'andraikitra amin'ny fanabeazana an'i Esri Espaina.
Ny mpianatra rehetra voasoratra ao amin'ny Oniversite dia afaka mahazo fahazoan-dalana isan-taona avy ArcGIS ho an'ny Desktop Advanced, miaraka amin'ny fanitarana manontolo amin'ny vidiny ambany. Ankoatr'izany dia hanana fampahalalana sy fitaovana fanampiny, ary koa ireo seminera maimaim-poana hanatsarana ny fampiasana ilay fitaovana.
Fanabeazana tsy tapaka ho an'ny ArcGis ho an'ny mpianatra
Fantatr'izy ireo fa ilaina ny mpianatra mba hampiofanana ara-panatanjahan-tena amin'ny fanadihadiana ara-jeografika, i Esri dia manome ny fitaovam-pampahalalam-baovao marobe mba hahazoana fampiofanana tsy tapaka momba ny ArcGIS: resource center, sehatra fiadian-kevitra, Hevitra momba ny ArcGIS, horonan-tsary, sns.
Mba hanamorana ny fidirana sy ny fampiasana mpianatra amin'ny fitaovany, dia manomana i Esri Seminars Cycle andro maimaim-poana, andro maimaim-poana izay ahitàna ireo vaovao lehibe indrindra amin'ny ArcGIS dia aseho amin'ny raharaha amin'izao fotoana toy ny Cloud GIS na fampivoarana ny fampiharana finday. Ary koa, online seminars, nokarakarain'ny Esri, dia azon'ny mpianatra rehetra maimaim-poana sy isam-bolana ihany koa.
Misimisy kokoa momba ny teknolojia ArcGIS
ArcGIS dia rafitra fampahalalana tanteraka izay ahafahanao mamorona, manadihady, mitahiry sy manapariaka ny data, modely, sarintany ary baolina ao 3D, ka manome azy ireo ny mpampiasa rehetra araka izay ilainy. Amin'ny rafi-pandrefesana, ny ArcGIS dia azo avy amin'ny mpiasan'ny Desktop, ny tranonkala browsers, ary ny terminal terminal izay mifandray amin'ny server departemanta, orinasa orinasa orinasa (Cloud Computing). Ho an'ny mpandraharaha, ArcGIS dia manome fitaovana ahafahan'izy ireo mamorona fampiharana manokana.
Ary koa, noho ny ArcGIS amin'ny aterineto, vahaolana SaaS feno, mamela anao hamorona sarintany maranitra maimaimpoana ary hizara izany amin'ireo mpampiasa GIS hafa manerantany mifototra amin'ny haitao rahona.
Fampiofanana GIS ho an'ny rehetra
Esri Spain dia manolotra seminera sy fampianarana fiofanana natokana ho an'ireo mpianatra mpandraharaha Esri, mpanjifa, mpiara-miasa, mpampiasa ary tsy mpampiasa. Ity fampiofanana ity dia mikendry ny hanomezana ny sarambabem-bahoaka sy ny orinasa ny fahalalana ilaina rehetra momba ny Geographic Information Systems, ary koa ny fanavaozana vaovao sy ny fanombohana ny rafitry ny GIS ao anaty rahona, mba hahafantaran'izy ireo voalohany ny tombotsoan'ity fitaovana ity .
For more information about 2012 Free GIS Training Program e soratra masina azonao atao ny manamarina ny pejy Internet http://www.esri.es/es/eventos/
Esri Spain Ny tanjony dia ny handray anjara amin'ny fampandrosoana ireo fikambanana, manome vokatra sy serivisy manana kalitao sy manavao, mba hanampiana azy ireo handray fanapahan-kevitra tsara kokoa. Esri dia manana ny traikefa sy ny enti-miasa hihaonana amin'ny filan'ny mpanjifa amin'ny sehatra toa ny fitantanan-draharaha, fanabeazana, loharanon-karena voajanahary, fifandraisan-davitra, fampiasana, fiarovana, geomarketing, fampiasana ary fitaterana.
Previous Post«Previous Cybernetic, mafy ny fanompoana fampiatranoana
Next Post Rafitra fampahalalana jeografika mampiasa Manifold GISmanaraka »